Kufuridzira Kushambadzira Statistics | Martech Zone
Mugovera, Mbudzi 16, 2019 Mugovera, Mbudzi 16, 2019 Douglas Karr
Isu takagovana infographics pa chii chine simba rekushambadzira ndiyo, iyo shanduko yekushambadzira kushambadzira pamberi, pamwe nezvinyorwa chaizvo kukurudzira kushambadzira kwakanyanya maitiro, sei kusashandisa vanokurudzira, uye mutsauko uripakati pe micro uye mukurumbira pesvedzero. Iyi infographic tsananguro yekutarisisa kwekushambadzira kwekushambadzira uye marongero azvino uno uye manhamba pane masvikiro nemikana.
Ivo vanhu veSmallBizGenius vaisa pamwechete yakazara infographic iyo inopa yakajeka mamiriro ekushambadzira kushambadzira nhasi, Pasi Pesimba: 84 Kufuridzira Kushambadzira Mateki. Iyo inotsanangura zvemagariro midhiya pesvedzero, Youtube pesvedzero, maitiro ekushambadzira, maitiro ekukurudzira, uye mabhurani anoshanda sei nevanokurudzira kuwana mibairo yakanaka.
Nepo kushambadzira kwekusimudzira kusiri iko kwekugadzira kwazvino, iko kwanyatso kusvika kumatunhu matsva mumakore gumi apfuura. Kudzoka muzuva, vatambi vemamuvhi, vatambi, uye vaimbi vanogona kuwana peni yakanaka nekusimudzira zvigadzirwa nemasevhisi. Panguva iyoyo, iyi yaive nzira inoshanda kwazvo yekusvika nekufurira vateereri vakawanda. Asi kwete zvekare. Mazuva ano, iko kutarira kwachinjira ku vanhuwo vateereri vanogona kutaurirana naye. Kufuridzira manhamba ekushambadzira anotiratidza chaizvo kuti maitiro aya anokanganisa sei nharaunda yedu uye izvo zvatinogona kutarisira mune ramangwana.
Raj Vardhman, MudikiBizGenius
Kiyi Kufuridzira Kushambadzira Statistics
Mu2018, makambani aishandisa kushambadzira kushambadzira akawana 520% inodzoka mukudyara.
49% yevashandisi vanovimba neanokurudzira recommendations yekutenga kwavo.
MunaJune 2018, Instagram yakasvika biriyoni vashandisi vanoshanda.
Micro-vanokurudzira nevashoma pane vateveri ve100k vane chekuita neruzhinji rwezvinyorwa pachikuva.
66% yevanokurudzira pawebhu tarisa pane fashoni, runako, kana mararamiro.
Iko kunonyanya kunetsekana kwe42% yevatengesi iri kubata nayo vateveri venhema (bots).
Tags: influencer kushambadzira roiinfluencer nhambamicro-influencerDzokera paKukurudziradzoka pakudyaradzoka pakushambadzira mariRoyinhamba